Isbarbardhiga u dhaxeeya Geomedia iyo GvSIG - Geofumadas
Isbarbardhiga u dhaxeeya Geomedia iyo GvSIG
Sebtember, 2008 Geospatial - GIS, GvSIG
Waqtiga xaadirka ah waa koobitaanka shaqada soo bandhigayee GIS II Open Source by Juan Ramon Diaz iyo Jordi Rovira Mesa Jofre ee warqada "Isbarbar of GIS ku salaysan il furan oo GIS ganacsi" waa marka la barbardhigo u dhexeeya qalabka GvSIG iyo Geomedia; inkasta oo aanay soo bandhigaan kale ee in la xoojiyo GvSIG sida SEXTANTE iyo horumarkii dhawaan; Waxaan qabaa shaqada aad u cuntid.
Nasiib darro waa arrin lagama maarmaan u ah in boostada ay noqoto mid ballaadhan oo lumiso qaabka daqiiqad, inkastoo ay ahayd mid la soo koobay. Waxaad soo bandhigi kartaa bandhigga dhamaystiran halkan.
Inkastoo aan aqbalo in qoraalladani waa marka aan ka maqnaado Dreamweaver si toos ah loo xakameeyo miisaska aan WordPress u oggolaanin
Shaqeynta Resultados LOOGU TALAGALAY
Tilmaamaha aasaasiga ah Goobaha Mashruuca: Labada GIS waxay la mid yihiin fursadaha, Geomedia Pro waxay suurtogal u tahay in ay soo celiyaan aragtida mapka. Maareynta Mabda ': GvSIG ma'aha Geomedia Pro, maadaama aysan ku darin fikradda isku xirnaanta, taas oo u oggolaaneysa layliyada furan ee GIS ee hay'adaha hadda jira inay ka madaxbannaan yihiin xiriirrada kala duwan. Editing layers: Waxaanu muujineynaa khadka taleefanka gvSIG, qaabka CAD, iyo tirada badan ee hiddaha hadda jira ee Geomedia Pro. Abuuritaanka mawduucyada: GvSIG iyo Geomedia waxaa loo siman yahay xilligan, labadaba GIS waxay u oggolaaneysaa abuurista mawduucyo fudud oo qiimo leh ama qiime ahaan. Waxaan ku arzaaqnayna wax miisaan siman in afarta qaybood (25% per section). natiijada dhamaadka waa: Geomedia Pro wax yar ka sarreeya sida gvSIG u functionalities aasaasiga ah. Qeybta oo hoosta ka xariiqday gvSIG yaraan, waxaa maaraynta Halyeeyga ah, sababta waa ay rigidity in dambe qarin miisaan kasta oo ogolaanaya hay'adaha ama geliso xidhiidhada hadda jira on GIS ah, maqnaanshaha xidhiidhka ka orientation sheegnay.
Falanqaynta Muuqaalka Noocyada: Waxaa jira afar qaybood ee falanqaynta suurtogalka ah: Sameeynta dib u-eegista sifooyinka, iskudayada, aagagga saameynta iyo weydiinta taayirada. Afarta gvSIG iyo Geomedia Pro, waxay leeyihiin shaqeyno matalaya. Si kastaba ha ahaatee, gvSIG shaqooyinka looma isticmaali karo ugu badnaan. Habka: Laga soo bilaabo barta of view of user a, Geomedia Pro waa sahlan marka la isticmaalayo awoodaha kala duwan falanqaynta da'ayeen. In screen hal user doorto hay'adaha doonaya in ay ka shaqeeyaan, xiriirka iyo sifooyinka codsan filter. In gvSIG, oo dhan wax soo saarka ee falanqaynta waxaa lagu keydiyaa Shapefile file taas oo ka dhigan in ay link saddex falanqaynta kala duwan oo loo baahan yahay in la abuuro laba files dhexe in ay yihiin isticmaalka no a. Falanqaynta mabaadi'da ayaa ah mid ka mid ah hawlaha ugu muhiimsan ee GIS marka ay timaaddo soo saarida macluumaadka tayada leh, iyo wixii ka sarreeya waxa ka mid ah waxa ka soocaya GIS CAD. Qodobkan aasaasiga ah waxaan qiimeynay laba dhibcood, hawlaha kala duwan (miisaanka 60%) oo ay taageerto GIS kasta, iyo habka (miisaanka 40%) ama kiis loo isticmaalo marka laga eego dhinaca aragtida user si ay u isticmaalaan falanqaynta falanqaynta. Kartida Raster: jajabinta, qaababka, shaandhaynta iyo wax-qabadka. Gabagabo: Gaaban, Geomedia Pro wuxuu ku taagan yahay kartida falanqeynta iyo tasiilaadka loo adeegsado isticmaalaha. GvSIG waa badeeco aad u da 'yar, waana inay wanaajisaa qaar ka mid ah farsamooyinka.
Awooda Raster Waxaan qiimeeyo ee arrintan la xiriira saddex fikradaha kala duwan: images georeferencing (35 miisaanka%), orthophotos bandhigay (35 miisaanka%); iyo, falanqaynta iyo maaraynta sawirada daba gala (miisaanka 30%). Hirgalinta sawirada: Qalabkuna wuxuu si siman u siman yahay labadii GIS, laakiin aad u deganaan gvSIG, marar badan qaliinku wuxuu ku dhamaanayaa qalad, taas oo ah sababta loo qiimeeyay gvSIG. Sawirista Orthophoto: Noocyada kala duwan ee qaababka raajada ah ee Geomedia Pro iyo gvSIG ay shaqeyn karaan ayaa la xaqiijiyay. Sifeynta iyo Isticmaalka: Qaybtan, gvSIG ayaa goolal badan ka dhalisay ballaarinta duulimaadka raajada. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka falanqayso xogta tirakoobka (histograms) ee sawirrada, si loo isticmaalo filtarrada sida isdhaafsashada tallaabada hoose. LOOGU TALAGALAY: Labada GIS dheelitiran yihiin, farqiga u yahay xasiloonida ay bixisay qalab Geomedia georeferencing ee Pro of images halka gvSIG muujinaysaa awoodaha ka xoogbadan, in shaandhaynta iyo maaraysay in ay kordhin raster mahad.
La shaqeyn karo Marka laga hadlayo isdhexgalka GIS iyada oo la adeegsanayo ilo kale oo xog ah ayaa la baranayaa, wadashaqeyntu waa kala-duwanaanta GIS. Waxaan guud ahaan qiimeyn doonaa fiirinta oo u kala qaybin doonaa ilaha macluumaadka afar qaybood: qaababka GIS, qaababka CAD, xarumaha macluumaadka iyo heerarka OGC.Foomamka GIS
Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Spatial / Locator, PostgreSQL / PostGIS
Gabagabo: Geomedia Pro waa GIS la wada shaqeyn karo oo awood u leh inuu akhriyo oo wax ka qoro ilo xogeedyo kala duwan (Microsoft Access, Oracle ...), iyo awood u lahaanshaha dhoofinta xogta qaababka CAD sida DWG. GvSIG waxay u taagan tahay inay rabto in ay la shaqayso heerarka OGC, iyo saadaalin wanaagsan oo lagu daro Oracle iyada oo xogta la socota PostgreSQL / PostGIS.
Waxqabadka Si loo qiimeeyo waxqabadka, waxaan doonayay in lagu cabbiro load ka (miisaanka 30%), maamulka xawaaraha (miisaanka 30%) iyo algorithms ayna falanqaynta aan ollogga (miisaanka 40%). In cabbir ka weyn, gvSIG wuxuu ahaa mid ka dhakhso badan Geomedia Pro, Natiijooyinka Geomedia waxay wanaajiyaan waqtiga lagu cabbiray by 50%, oo kaliya adoo bedelaya qaabka macluumaadka Shapefile ee Geomedia Smartstore. In qiyaasta xawaaraha ee maamulka waxaan u gudbineynaa tiro balaadhan oo macluumaad ah oo ka kooban hal lakab oo kale. GvSIG mar kale waa ka dhakhso badan yahay Geomedia Pro. qiyaasta soo-kabashada Qodobbada falanqaynta falanqaynta, Geomedia ayaa soo baxday: xasilinta qalabka iyo xawaaraha. GvSIG waxaa jira khaladaad ay sababtay maktabadda JTS ama aadan awood u lahayn inaad la shaqeysid kor-u-qaadyada qaarkood. LOOGU TALAGALAY: gvSIG waa ka dhakhso badan Geomedia Pro, garaafka ama dhaqaaqa
xog laga soo qaaday lakab si database, tiro badan oo macluumaad ah. Dhinaca kale, Geomedia Pro wuxuu u taagan yahay xasilloonida iyo xawaaraha marka la sameynayo falanqaynta falanqaynta, sidaas darteed, aad ayey uga sareeysaa gvSIG.
Meelaynta GIS Waxaan qiimeynaa caalamka seddex su'aalood oo kala duwan: in GIS ay u oggolaato shakhsi ahaaneed, nooca luuqada ama qoraallada oo suurtagal ah; iyo, dukumentiyada jira. GIS oggol yahay shakhsi ahaaneed? Labada kiis ee jawaabtu waa mid togan: haa! Noocyada Luqadda ama Qorista, gvSIG wuxuu leeyahay luqad Scripting (Jython) oo waxaad sidoo kale abuuri kartaa kordhinta Java iyadoo la isticmaalayo fasalada gvSIG. Geomedia Pro waxaa lagu horumariyaa luuqadaha asaasiga ah ee 6.0 iyo .Net, oo leh maktabado qayabeed ah si loo abuuro amarrada isku dhafan, ama barnaamijyada dibadda ee SIG. Dukumentiyada, Geomedia Pro waxay leedahay dukumentiyo ballaaran oo shay kasta oo lagu sharaxay oo ay hodan ku tahay tusaalayaal. GvSIG, dukumiintiyadu waa kala firdheen oo gacmeedkuna waa daalan yihiin. Waxaa jira maqnaanshaha sharaxaadda qayb kasta iyo dhismaha fasalka gvSIG, iyo sidoo kale sharaxaad dhamaystiran oo ah fasalada lagama maarmaanka ah. LOOGU TALAGALAY: Labada GIS, xalinta khilaafka ayaa si fiican loo xalliyaa. Diiwaanada gvSIG, qiimeynta waa wax xun. Barnaamijka khabiir ku shaqeeya GIS wuxuu sahlan yahay in lagu qaabeeyo Geomedia Pro marka loo eego gvSIG, sababtoo ah khariidadaha ku jira gvSIG.
Awoodda 3D Waxaan qiimeynay awoodda waxqabadka ee isku-duwidda Z (miisaanka 40%), matalaadda dhulka 3D (miisaanka 30%); iyo, matalaadda Qaybaha (miisaanka 30%). Gabagabo: GIS Midkoodna fursado halis ah cutubyada qiimeeyaa, oo kaliya ku saabsan Geomedia fiican Pro laba awoodaha: geocode Z ku duwo oo aad wada xajisaan dhoofinta in ay qaabab kale; iyo suurtagalnimada, amarkannaga abuuray by shirkadda dibadda Intergraph, extrusions qabtaan titrations iyo geesoolayaashu bandhigay ka Google Earth ama la Geomedia Dhul, wax soo saarka kaabaha la functionalities doonayo shaqeeya. In gvSIG fursadaha kuwan laga heli doonaa 3D sii daayay version mustaqbalka ee gvSIG.
Khariidadaha Sidii aan horeba uga soo muuqannay xusuusta mashruuca, jiilka Map waa sababta ugu dambaysa ee loo isticmaalo GIS. Qeybtaan waxaan qiimeynay isticmaalka (miisaanka 50%) ee qalabka iyo dhalaalka (miisaanka 50%) ee natiijada. Isticmaalka: Geomedia Pro, qalabkii khariidadu wuxuu noqon karaa mid intaa ka badan, inkastoo habka loo abuurayo khariidadaha waa sahlan tahay. GvSIG, waxaan helnaa qalab sahlan oo la isticmaalo isla markaana isla waqti isku mid ah laga bilaabo bilawga, yar marka baaxadda maabka ee khariidad la guuro, maadaama dhismayaasha muuqda lumay; dhinaca kale waxaa lagu magdhowaa jiilka tooska ah ee map-ka ee PDF. Iskudhin: Labada gvSIG sida Geomedia Pro, ka dhigay ay heli karaan user dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo abuuro qalab soo jiidasho Map: awoodaha tafatirka, fursadaha ahaanayta calaamadaha iyo qataarro Miisaankiisa (qaabab: SVG in gvSIG iyo WMF in GeoMedia), sixiddiisa halyeeyga . LOOGU TALAGALAY: Labada GIS waxay u dhigmaan midba midka kale, iyada oo laba qalab loogu talagalay sameynta iyo abuurista khariidado xirfadle ah.
Dukumentiyada iyo Taageerada Dukumeentiga aan ku filneyn ama taageerada aan ku filnayn isticmaalaha waxay keeni kartaa isticmaale ahaan ama tuuro isticmaalka GIS. Si aan u qiimeyno, waxaan u qeybinay laba qaybood: dokumantiyo iyo taageero, oo leh miisaan siman ah si loo qiimeeyo caalamka. Dukumentiyada: In the case of Geomedia Pro, qiimaynta waa mid aad u wanaagsan, waxaa jira cadayn cayn kasta oo ay la socdaan tusaalooyin lagama maarmaanka ah rakiban la Geomedia Pro In gvSIG xaqiiqda ah ee haysta in ay soo bixi warqadaha oo dhan oo aan ugu yaraan waraaqo lagu rakibay oo ay la socdaan. qalab iyo superficiality ee warqadaha horumarka nagu waajib in aan la qiimeeyaa ugu marayso. Taageero: Khibrad Project Final la gvSIG waa in, saddex saacadood gudahood ka dib markii iska dhigaya su'aasha ah in liiska dadka isticmaala, jawaab wax ku ool ah waa la helay. Muujinta qoondaynta gvSIG ee liiska isticmaalaha. Ka hortagidda waqti kasta oo uu qofku dareemayo inuu kaligiis keligiis horay uga dhacay dhacdo kasta. Waxaa la soo bandhigay si togan, waayo-aragnimo sanado badan Intergraph, baahida dadka isticmaala ay. Taageerada la siiyay Geomedia Pro waxaa lagu fuliyaa seddex siyood: Diiwaanka aqoonta, taageerada internetka iyo telefoonka. LOOGU TALAGALAY: Marka la haysto isticmaalaha qalabka, labada GIS waxay u dhigmaan. In la eego waraaqo Geomedia baas Pro hore ee gvSIG, jilitaanka iyo Tusaale fiican. Waxaan aad ugu qiimaha ee GeoMedia waraaqo Pro, la geeyo si loo soo dajiyo qalab aan user isagoo si ay u tagaan links web for Tota dukumentiyada lagama maarmaanka ah sida in gvSIG.
Qeybaha Dhaqaalaha Kharashka GIS (shatiyada, tababarka, shakhsiyeynta, dayactirka ...) ayaa la sharxay, tusaalaynaya kharashka dhaqaale ee 'ku-samaynta liisan liisan muddada labada sano ee ugu horreysa; iyo, qiimeynta haddii qiimaha uu ku habboon yahay badeecadda. Gabagabo: Qiimaha Geomedia Pro uu ka badan yahay in of gvSIG, si kastaba ha ahaatee, Geomedia Pro waa mid aad u deggan oo leh taageero jawaab wanaagsan ka saarka Intergraph. Jawaabta waxay noqon doontaa: labada GIS waxay leeyihiin qiimaha ay ku kacayaan.
Khidada Lacagta 13.000-14.000 € 0 €
Qiimaha dayactirka liisan 2.250 € 0 €
Taageero Kharash Waxaa ku jira kharashka dayactirka: taageerada telefoonka, liiska user; iyo, haddii mugga liisanku uu muhiim yahay, farsamada qof ahaan loogu talagalay xafiisyada macaamilka. 0 €, nidaamka taageerada wuxuu ku salaysan yahay liisaska isticmaalaha iyo xallinta shaki ayaa lagu qabtaa 24-48h.
Kharashka tababarka 900 € 27 saacadaha 5 300 € koorso saacadood ah 20.
Qiimaha u dhigma 500 € -700 € nin / maalin 240 € - 320 € nin / maalin.
Shaxda natiijooyinka, waxaan ku tusaynaa qiimeynta dhinac kasta; iyo, qiimeynta guud ee GIS kasta; miisaanka 1 ilaa 5 halkaasi oo markii hore aan ka tarjumay 0% ilaa 100%: 20% def
iciente, 40% waa aan ku filnayn, 60% waa ku filan yahay, 80% waa mid cajiib ah, iyo 100% excelente.Se muuqataa xiiso leh waa in guud ahaan qaadataa gvSIG aad u xiiso badan ay u noqdaan kale oo yara degan, gaar ahaan, maxaa yeelay waxa uu leeyahay qorshe horumarineed si wanaagsan u qeexan arrimuhu muddada-dhexe ah.
Qiimeynta waxaa lagu qiimeeyaa Geomedia Pro GvSIG
Qaababka Aasaasiga ah ee GIS 100% 80%
Falanqaynta Muuqaalka 100% 80%
Awooda Raster 80% 80%
Iskaashi la leh ilaha macluumaadka kala duwan 100% 80%
Waxqabadka 80% 80%
Kartida Shakhsi ahaaneed, Scripts ama luqadaha aan GIS ahayn 100% 60%
3D awoodaha 40% 20%
Khariidadaha 100% 100%
Taageerada Dukumentiyada 100% 80%
Arimaha dhaqaalaha ee la qiimeeyo 100% 100%
Qiimaynta adduunka ee GIS 100% 80%
Post Previous«Previous AutoDesk ayaa ku tusi doonta sida ugu fiican ee RasterDesign
Post Next Dhismayaasha HumorNext »
2 Jawaab ah "Isbarbardhiga u dhaxeeya Geomedia iyo GvSIG"
tvinternet08 isagu wuxuu leeyahay:
hello, blog aad u wanaagsan, haddii aad rabto, gal websaydaan, si aad u soo dirto comment.saludos.